ဒေါက်တာဇော်ကြီး Dr. Zaw Gyie: 01/22/13
www.drzawgyie.blogspot.com ဒီမှာလာပြီး sex အကြောင်း ဗဟုသုတရှာနေကြတဲ့ sex ချစ်သူပရိသတ်အပေါင်း မင်္ဂလာပါခဗျာ ဒီဆိုဒ်ဟာဆိုရင်ဖြင့် sex ချစ်သူ ဝါသနာတူသူအားလုံးအတွက် ကျွန်နော်ဒေါက်တာဇော်ကြီး တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းထိမ်းချုပ်ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မှ ဆက်စပ်ထားခြင်းမရှိပါ ဒါ့ကြောင့် တင်ထားသောပိုစ့်တွေမှာ အဆင်မပြေတာလေးတွေလည်း ရှိချင်ရှိပါမယ် အားလုံးကိုသည်းခံပြီး ကြည့်ရှုအားပေးသွားကြပါစေလိုကြောင်း ကျွန်နော်ဒေါက်တာဇော်ကြီးမှ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.....။
We don't allow watch and read below 18 year old in this site. အသက် ၁၈ နှစ်အောက်လူငယ်များ ကြည့်ခွင့် ဖတ်ခွင့် မပြုပါ...၊ ခွင့်ပြုချက်မလိုက်နာပဲ ကိုယ့်သဘောနှင့်ကိုယ်ဝင်ကြည့်ပြီး ပြသနာတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင် ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံ.......။ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ကဲ ဘော်ဒါတွေမဲပေးတဲ့ကားလေးလာပြီဗျာ ဘာကားဆိုတာတော့မပြောတော့ပါ အောက်မှာမဲနိုင်တဲ့ကားဖြစ်ပါသည်.............။ အောက်မှာ မဲပေးတဲ့နေရာမှာမဲပေးခဲ့ပါ ဘာနာမည်မှမယူပါဘူး မဲအရေအတွက်သက်သက်ပါ မဲအများဆုံးကို ဦးစားပေးတင်သွားပါမည်..........။
မန်းဘားဝင်နည်း ဒီမှာ ကြည့်နိုင်သည်
ဝတ္ထုစာအုပ်စင် - ၁၈
ဝတ္ထုစာအုပ်စင် - ၁၉
ဝတ္ထုစာအုပ်စင် - ၂၀
ဝတ္ထုစာအုပ်စင် - ၂၁
ဝတ္ထုစာအုပ်စင် - ၂၂
ဝတ္ထုစာအုပ်စင် - ၂၃
ဝတ္ထုစာအုပ်စင် - ၂၄
ဝတ္ထုစာအုပ်စင် - ၂၅
ချစ်သူလေး ရဲ့ ချစ်ဗိမာန်
ကြောင်ကြီး Royal Big Cat
Dr.တင်ဆွေ ဆေးပညာပေး စာပေများ
ကုန်ကြမ်းမျာ drzawgyie1love@mail.com သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည် . Awesome Inc. template. Powered by Blogger.
ဒေါက်တာဇော်ကြီး ဆိုဒ်သို့ ပုံများ ဗွီဒီယိုများ ရောက်ရှိလာပါက အရင်ကကျွန်နော်စိတ်ကောင်းရှိလို့ပြန်ရှာပြီးဖျက်ပေးလိုက်ပါတယ် ခုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်နော်စိတ်ကောင်းမရှိတော့ဘူး လုံးဝပြန်ဖျက်မပေးတော့ပါ။